လောကဧည့်သည် Pilgrim's Progress - Christian Literature Illustration (Myanmar-English)
ဤလောကကြီးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခဏတာရောက်လာချိန်တွင် မိဘ၊ဆွေမျိုးများ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပညာသင်၊ စားသောက်နေထိုင်ရစဉ်က လူအများစုမှ ဝန်လေးပင်ပန်းခြင်းမရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ငယ်စဉ်က ဝန်လေးခြင်းမရှိခဲ့ပဲ၊ ဘုရားနှင့်ဝေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးသောဘဝမှ အသက်ရွယ်ရလာချိန်တွင် မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ စတီဗင်ကိုဘေး (died in 2009) ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်7habits of highly effective people လိုပဲ သြဇာကြီးသူဘဝသို့ ငယ်ရွယ်သူတိုင်း ရောက်ရှိလိုကြသည်။ ပညာသင်သည်။ အလုပ်အစွမ်းကုန်လုပ်သည်။ ဝင်ငွေများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ Apple iPhone တီထွင်သူ စတိဂျော့ခ်ျ (died in 2012) သည်လည်း အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ အချိန်တန်လျှင် ဖွဲများကဲ့သို့ လေထဲလွင့်ပါးပျောက်ကွယ်သွားရလေ့ရှိသည်။ အကြီးကျယ်ဆုံး လူသားများကို ကြည့်ပါက မိမိကဲ့သို့ပင် သာမန်လူများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယခု စာအုပ်မှာ ထောင် အနှစ်၂၀ကျခံခဲ့ရသော အင်္ဂလန်မှ ဧဝံဂေလိ ဓမ္မဆရာတစ်ဦး ရေးသားခဲ့ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း၃၀၀ကျော် ယခုအချိန်ထိ ဥရောပတွင် ဂန္တဝင်စာပေအဖြစ် ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွင် ပြဌာန်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ယုံကြည်သူတစ်ဦး၏ ဘဝခရီးလျောက်ခြင်းကို အလွန်လှပစွာ ရေးသား၊ ဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်စာ၊ နားလည်၊ ဖတ်တတ်မှ မြန်မာများ ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ ကိုးရီးယားများကဲ့သို့ ထိုးဖောက်နိုင်မည်ဟု ဆရာများစွာက ပြောခဲ့၊ သင်ကြားခဲ့သော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာပေကို စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှ စတင်ပြီး မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများ ဝေးခဲ့ရသည်။ အားနည်းခဲ့သောကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်ပိုပြီး အဆက်ပြတ်ခဲ့သည်။
ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များသာမက ၊ အခြားဘာသာဝင်များလည်း အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ရေးအတွက် ဖတ်ရှုလေ့လာပါက အလွန်အကျိုးရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်များအတွက်မှု ဦးနှောက်သာမက၊ နှလုံးသားပညာပါ တိုးတက်လာစေသည်။ ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ မိမိသင်းအုပ် ကိုးကွယ်ခြင်းများမှ လွတ်မြောက်ပြီး ဘုရားကို ပထမထားပြီး ကိုးကွယ်လာနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ငွေ၊ ကြေး၊ ဥစ္စာ၊ လောကပညာ၊ ရာထူး၊ အာဏာများသည် ဘုရားပေးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖြစ်သည်။ တချိန်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်စဉ် ခဏတာ ဘဝခရီးလမ်းတွင် အောက်ပါ ပုံအတိုင်း လေးလံသောဝန်ထုတ်ကို ထမ်းပြီး ၊ ထာဝရအသက်ကို ရှာဖွေနေသော ဖေဖေ ကို ဇနီး၊ သားသမီးများက ဟစ်အော်လျှက် ဝမ်းနည်း၊ ဒေါသဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
မိမိ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဝန်ထုတ်ကြီးမှ မိမိလွတ်မြောက်ရန် ပထမဖြစ်သည်။ မိမိလွတ်မြောက်သွားပြီးနောက် မိမိ ဇနီး၊ သားသမီးများကို ပြန်လာပြီး ကယ်တင်သော ဦးခရစ်ယာန် (ဦးဧဝံဂေလိ) အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
စာမျက်နှာ ၂၄၂ ရှိသောစာအုပ်ကို ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့်မှ ဆရာမျိုးသူထံသို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေများ ဖတ်ရှုရန် အပိုင်းခွဲပြီး ဒေါင်းလုပ်ဖို့ တင်ပြပါမည်။ ထိုစာအုပ်ကို မူလထုတ်ဝေသူ အောင်သုခလမ်း၊ ၉မိုင်၊ မရမ်းကုန် ဖုန်း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို့ အမှာစာ ပို့ပြီး မိမိချစ်မိတ်ဆွေများကို စာအုပ်ဝယ်ယူ လက်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ မုရန်
စာမျက်နှာ ၂၄၂ ရှိသောစာအုပ်ကို ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့်မှ ဆရာမျိုးသူထံသို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေများ ဖတ်ရှုရန် အပိုင်းခွဲပြီး ဒေါင်းလုပ်ဖို့ တင်ပြပါမည်။ ထိုစာအုပ်ကို မူလထုတ်ဝေသူ အောင်သုခလမ်း၊ ၉မိုင်၊ မရမ်းကုန် ဖုန်း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို့ အမှာစာ ပို့ပြီး မိမိချစ်မိတ်ဆွေများကို စာအုပ်ဝယ်ယူ လက်ဆောင်ပေးရန်၊ အားပေးလိုက်ပါသည်။ မုရန်
Total 262 pages (Illustration with Burmese /English), 20 pages can be download
လောကဧည့်သည်နှင့် သူ၏မိသားစုပုံပြင်ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်က ရေးသားခဲ့ပြီး ယေရှုခရစ်တော်အား သက်ဝင်ယုံကြည်သူများအတွက် အထူး၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ နိုးကြားတက်ကြွမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလည်း ဘာသာပေါင်း များစွာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသည်။
လောကဧည့်သည်နှင့်သူ၏မိသားစုများ တွေ့ကြုံခံစားရသော စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများ၊ ဤအရာများကို မည်ကဲ့သို့ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆုံးတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် ထာဝရခန့်ညားလှပလျှက် ရှိသော ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကို မည်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ဤစာအုပ်အား ဖတ်၇ှုခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
The story of Pigrim and his family was written over 300 years ago, and has been an inspiration to many believers. It has many languages of the world.
Read about all the difficulties and temptations that these people faced. but also how they overcame them, and how in the end they reached their goal, the Ethernal and Beautiful City.